Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247609 times)
« Reply #320 on: July 12, 2011, 09:59:00 AM »
" မ သိ တာ ချင်း အ တူ တူ "
ဆရာမက ပီတာလေးကို မေးသည် ။
" ဆိုကြပါစို့ ... ဆရာမက မင်းအဖေကို ရူဘယ် တစ်ထောင် ချေးလိုက်တယ်..
တစ်လကို ရူဘယ် တစ်ရာ ပြန်ဆပ်မယ်လို့သူ ကတိပေးတယ်.. ခြောက်လ
ကြာတဲ့အခါမှာ သူ ဆရာမကို ဘယ်လောက် ပေးစရာ ကျန်မယ် ထင်သလဲ. "
" ရူဘယ် တစ်ထောင် ပါ "
" ဟေ..မင်းက ငါးတန်း ရောက်နေတာတောင် သင်္ချာရဲ့အခြေခံတွေကို မသိ
" ဆရာမလဲ ကျနော့် အဖေ အကြောင်းကို မသိသေးပါဘူး.. "
« Reply #321 on: July 12, 2011, 12:26:28 PM »
" မိန်း မ ရှေ့က နေ "
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ.. ကျေးရွာလမ်းပေါ်တွင် အမျိုးသား တစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာသည် ။
၄င်း၏ ရှေ့ မှ မိန်းမဖြစ်သူက လျှောက်သည် ။ အဖိုးကြီး တစ်ဦးက တွေ့ သည်နှင့် ဤသို့ ပြော
" ဟေ့..အပ္ပဒူလာ.. ကိုရမ်ကျမ်းကို မင်း မဖတ်ဖူးဘူးလား .. မိန်းမဆိုတာ ယောင်္ကျားရဲ့ နောက်
က လိုက်ရတယ်ကွ... "
" အပိုတွေ လာပြောမနေနဲ့. ကိုရမ် ကိုရေးတုန်းက လမ်းပေါ်မှာ မိုင်းဗုံး မြှုတ်တာတွေ မရှိသေးဘူး
ဟေ့.. ဖာတီမာ.. ရှေ့ ကို ဆက်လျှောက်.. "
« Reply #322 on: July 12, 2011, 12:34:13 PM »
" ကျေး ဇူး ကု ဋေ ကု ဋာ "
တည်းခိုခန်း ပိုင်ရှင်က လာရောက်တည်းခိုသူကို ပြောသည် ။
" မိတ်ဆွေနဲ့အတူပါလာတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ဇနီး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ
သက်သေ မပြနိုင်ရင် တစ်ခန်းထဲမှာ အတူတူ နေရာချ မပေးနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျာ.. "
" ဒီမိန်းမဟာ ကျုပ်ရဲ့ဇနီး မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာများ ခင်ဗျား သက်သေထူနိုင်မယ်
ဆိုရင်တော့.. ခင်ဗျားကို တစ်သက်လုံး ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးဗျာ.. "
« Reply #323 on: July 12, 2011, 12:43:59 PM »
" သ တိ မေ့ ရော ဂါ "
လူနာ၏ ဇနီးသည်ကို လမ်းမှာတွေ့ သည်နှင့် ဆရာဝန်က မေးသည် ။
" ခင်ဗျားရဲ့ယောင်္ကျား နေကောင်းရဲ့မဟုတ်လား.. သူ့ ရဲ့သတိမေ့ တဲ့ ရောဂါ
" ကောင်းကောင်းတော့ မပျောက်သေးဘူး ဆရာ.. မနက်စာ စားပွဲကိုရောက်တိုင်း
ပထမဦးဆုံး ကျမခေါင်းကို ဇွန်းနဲ့ ခေါက်.. ကြက်ဥပြုတ်ကို နှာခေါင်းနဲ့နမ်းတုန်းပဲ.. "
" ကူုး ချ ထား တယ် "
" ဟေ့ မောင်ပီတာ.. မင်းရေးထားတဲ့ ခွေးအကြောင်း စာစီစာကုံးဟာ မင်းအစ်ကို
ရေးတာနဲ့တစ်ထပ်တည်းပါလား.. "
" သြော်...ဒါလား.. ကျနော်တို့အိမ်မှာ ဒီခွေး တစ်ကောင်တည်း ရှိတာကိုး ဆရာမရဲ့"
« Reply #324 on: July 12, 2011, 12:52:52 PM »
" အား ကြီး စိတ် ဆိုး တယ်. "
ရေချိန်အတော် ကိုက်လာသော ယောင်္ကျား အိမ်ပြန် ရောက်လာသည် ။ တံခါးဖွင့်ပြီး
ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့ တွင် ရပ်လိုက်သည် ။ မှန်ပေါ်တွင် မိမိ ၏ ပုံကို မြင်ရသည် ။
" ငါ မရှိတုံး အခွင့်ကောင်းယူပြီး ငါ့ မိန်းမဆီ မင်းလာတယ်ပေါ့လေ.. ဟုတ်လား ..
ဟေ့ကောင်... အခုချက်ချင်း ထွက်သွားစမ်း.. "
မှန်ပေါ်မှ အရုပ်သည် နေရာမှ မရွေ့ ချေ..။ ထိုအခါ ဇိုးသမားသည် ကုလားထိုင်ကို
ဆွဲယူပြီး မှန်ကို ခွဲပစ်လိုက်သည် ။ မှန်ကွဲများ ပြန့် ကျဲကုန်သည် ။
" ဟေ့..မိန်းမ.. မင်းလင်ငယ်ရဲ့မျက်မှန် အကွဲစတွေ လာသိမ်းစမ်း.. "
« Reply #325 on: July 12, 2011, 01:09:27 PM »
" စား ချင် သ လား "
အီဗန်သည် မိမိ၏ သူငယ်ချင်း နီကိုလိုင် အိမ်သို့ရောက်လာသည် ။ နီကိုလိုင် ၏
မိခင်က တံခါး ဖွင့်ပေးသည် ။
" နီကိုလိုင် ထမင်းစားနေတယ်ကွဲ့ .. မင်းလဲ ထမင်း စားချင်မယ် ထင်တယ်.. "
" အဲ့ဒိလိုဆို အိမ်ပြန် ထမင်းသွားစားချေ.. ပြီးတော့မှ ပြန်လာခဲ့ပေါ့.. "
" အ ရည် အ ချင်း "
" ၃၀ ကို ငါးနဲ့မြှောက်ရင် ဘယ်လောက်ရမလဲ. " ဟု စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က
အလုပ်လာလျှောက်သူ လူငယ်အား မေးသည် ။
" ဘယ်အဖွဲ့ တွေနဲ့လာစားသလဲ......ဘယ်အချိန်မှာ လာစားသလဲ.. ပြီးတော့ ဒီ့မတိုင်
မီ သူတို့ဘယ်လောက် အထိ သောက်ထားကြသလဲ.. "
" ရပြီ... မင်းကို အလုပ်ခန့် ထားလိုက်ပြီ. "
« Reply #326 on: July 14, 2011, 09:43:40 AM »
" အ တု ယူ ခိုင်း မှာ စိုး တယ် "
" ဦးရဲ့သမီးကို ကျနော်နဲ့ဘာကြောင့် လက်ထပ်ခွင့် မပြုတာလဲ ခင်ဗျာ..
ဦး သိတဲ့အတိုင်း ကျနော်ဟာ ဆေးလိပ် မသောက်.. အရက် မသောက်
လောင်းကစားလဲ ၀ါသနာ မပါတဲ့ အပြင် မိန်းမ မရှုတ်ဘူး မဟုတ်လား.. "
" မောင်ရင့်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး မောင်ရင့် အတိုင်း နေဘို့ငါ့ မိန်းမက စံနမူနာ
ယူခိုင်းနေမှာ စိုးလို့ ဟေ့ ..... "
" ပြစ် မှု "
တရားရုံ့းတွင် ဖြစ်သည် ။
တရားခံ.........." တရားသူကြီးမင်း ခင်ဗျာ.. မနှစ်က တရားသူကြီးရဲ့ဇနီး ရေနစ်တုန်းက
သူ့ အသက်ကို ကျနော် ကယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တင်ပြလိုပါတယ်.. "
တရားသူကြီး.. " မောင်မင်း....နောက် ဘာပြစ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့သေးလဲ.. "
« Reply #327 on: July 14, 2011, 10:00:48 AM »
" သေ ချင်း ဆိုး "
ယောင်္ကျားဖြစ်သူက မြင်းပြိုင်ပွဲသို့သွားကာ " သေချင်းဆိုး " အမည်ရှိ
မြင်းဘက် မှနေ၍ ပုံအော လောင်းလိုက်သည် ။ " သေချင်းဆိုး " ပထမ
ပန်းဝင်လာသဖြင့် လောင်းကြေး အမြောက်အများ အနိုင်ရလိုက်သည် ။
" ဒီမြင်း အနိုင်ရမယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲဗျ.. "
" ကျုပ်မိန်းမက နိမိတ် ပေးလိုက်တာဗျ.. အိမ်ကအထွက် မြင်းပွဲသွားမယ် ဆိုတာ
သိတာနဲ့" သေချင်းဆိုး " လို့လှမ်းအော်လိုက်တယ်လေ.. "
« Reply #328 on: July 14, 2011, 10:14:43 AM »
" ဦး ဘ "
" သား..ဒီနေ့ကျောင်းမှာ ဘာတွေသင်ရသလဲကွ. " ဟု အဖေ ဖြစ်သူက
ကျောင်းမှ ပြန်လာသည့် သားငယ်အား လှမ်းမေးလိုက်သည် ။ လွယ်အိပ်ထဲ
မှ စာအုပ်ကို ထုတ်ပြီး သားငယ်က ပြန်ဖြေသည် ။
" ဒီနေ့ကျောင်းမှာ စာစီစာကုံး ဖြေရတယ်.. "
" ဘာအကြောင်း ဖြေရတာလဲ.. "
" ကျွန်ုပ် ၏ အဖေ ပါ. "
" ဟုတ်လား..သား ဘယ်လို ဖြေလိုက်လဲ.. "
" ကျွန်ုပ်၏ အဖေမှာ ဦးဘ ဖြစ်ပါသည် ။ အဖေသည်.×××××××
" ပြန်ပြောစမ်းပါဦးကွ. "
" ကျွန်ုပ် ၏ အဖေမှာ ဦးဘ ဖြစ်ပါသည် ။ အဖေသည် ××××××
အဖေ ဖြစ်သူမှာ ဘေးနားထိုင်နေသည့် မိန်းမအား လှည့်မေးသည် ။
" မိန်းမ.. ငါ မရှိတုန်း ဦးဘ များ လာသွားသေးလားကွ ဟေ.. "
" ရှင်ကလဲ.. ကလေးတွေ စာစီစာကုံး ဖြေလို့ လွယ်အောင် နာမ်စား သုံးထား
" ဟုတ်တယ် အဖေ.. ကျနော့်အဖေတင် ဦးဘ မဟုတ်ဘူး.. ကျနော့် သူငယ်ချင်း
အဖေကလဲ..ဦးဘ ပဲ.. "
" ဟေ.... ဦးဘ က တို့ တစ်ရပ်ကွက်လုံး ၀င်မွှေသွားတာကိုးကွ... "
ဆရာ အော်ပီကျယ် ၏ ဟောပြောပွဲတစ်ခု မှ
« Reply #329 on: July 18, 2011, 10:01:32 AM »
" ဖြေ ချင် သေး တယ် "
ဆိုဗီယက် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဘရက်ဇညက် ၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင်
ဖြစ်သည် ။ မေးခွန်း တစ်ခုချင်းကို ဘရက်ဇညက် က ဖြေကြားသည် ။ နောက်ဆုံးတွင် အခမ်းအနား
မှူး လုပ်သူက ...
" မေးခွန်းတွေ ရှိပါသေးသလား.. " ဟု သတင်းထောက်တို့ ကို မေးသည် ။ မည်သူမှ မမေးတော့
သောအခါ " မေးစရာ မရှိတော့သည့်အတွက် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ရုတ်သိမ်းကြောင်း " ကြေ
ငြာသည် ။ ထိုအခါ ဘရက်ဇညက် က ချက်ချင်းလက်တားပြီး .." ဘာဖြစ်လို့ရုတ်သိမ်းရမှာလဲ..ကျုပ်...
ဆီမှာ အဖြေ ၂ ခု ကျန်သေးတယ်.. " ဟု ပြောလိုက်သည် ။